Fomba fanaovana raozy amin'ny gazety amin'ny fomba mora | Asa tanana
Marian monleon | | Asa-tanana ho an'ny ankizy
Amin'ny asa tanana anio dia ho hitantsika ny fomba fanaovana raozy amin'ny gazety amin'ny fomba mora. Mora tokoa ny ahafahantsika manao izany amin'ny ankizy sy mampiasa azy io handravahana fanomezana ary hahatonga azy ireo hahatsapa ho anisan'izany.
Izy ireo dia afaka vita amin'ny saika karazana taratasy, magazine, baoritra, ravina miloko ary azo ampiasaina hanao zavatra maro izy ireo satria tonga lafatra toy ny haingo. Ohatra roa no asehoko anao:
1 Fitaovana fanaovana raozy:
Fitaovana fanaovana raozy:
CD izay tsy manompo anay, na singa boribory rehetra hanaovana azy ho modely.
Atombohy amin'ny fanaovana sary a faribolana, raha ny amiko dia nanampy ny tenako tamin'ny CD aho, saingy azonao ampiasaina izay tianao: lovia, sarony avy amin'ny vilany. Miankina amin'ny halehibe azy io, ny raozy dia hivoaka habe iray na hafa.
Fohy manodidina ny drafitra ny faribolana.
Mariho ellipse ao anaty faribolana. Raha pensilihazo no anaovanao azy dia hialanao fa ho hita eo ny marik'ireo fanamarihana, nataoko izany mba hahitanao ny endrik'ilay ellipse tsara kokoa.
Miaraka amin'ny hety hitanao manapaka ity endrika elliptika ity. Hanampy anao hitazona ny hety izany ary hampihetsika ny taratasy rehefa manety ianao.
Ahodia ity endrika ity: atombohy avy any ivelany ary ahodino amin'ny ellipse iray manontolo mandra-pahatonganao any amin'ny farany.
Avelao ambonin'ny tany ary izy irery no handray ny takelaka. Nandao fotsiny pegar miaraka amin'ny silicone mafana ary ho vonona ny raozy.
Ianao dia afaka ampiasao amin'ny tetikasa samihafaEny, ampiasaina amin'ny zavatra rehetra izy ireo. Atoroko anao roa ny fomba handravahana fanomezana ary hataoko firavaka tonga lafatra izy ireo na apetaho eo an-joro zorony iray izay manome io fikitika manokana io ho an'ny fanomezana.
Manantena aho fa tianao izy ireo ary manome aingam-panahy anao izy ireo, avelao ny eritreritrao hanidina sy hanao fehezam-boninkazo raozy, tsimatra volo, afovoany sns ...
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Asa tanana » asa-tanana » Asa-tanana ho an'ny ankizy » Fomba fanaovana raozy amin'ny gazety amin'ny fomba mora